3H2O2 + 2Na3[Cr (OH)6] → 8H2O + 2NaOH + 2Na2Crown4
hydrogen peroxide biyaha sodium hydroxide Chromate sodium; Chromate sodium (VI); Milixda cusbada loo yaqaan 'chromic acid'
3 2 8 2 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3H2O2 + 2Na3[Cr (OH)6] 8H2O + 2NaOH + 2Na2Crown4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O2 (hydrogen peroxide) ay kaga falceliso Na3[Cr(OH)6] ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo NaOH (sodium hydroxide) iyo Na2CrO4 (Sodium chromate; Sodium chromate (VI); Chromic acid disodium cusbo)?
Dhacdada ka dib H2O2 (hydrogen peroxide) waxay la falgashaa Na3[Cr(OH)6] ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3H2O2 + 2Na3[Cr (OH)6] 8H2O + 2NaOH + 2Na2Crown4
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na2CrO4 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2CrO4 (Sodium chromate; Sodium chromate(VI); Chromic acid disodium cusbo)
H2O + 2NaO2 → NaOH + O2 + NaHO2
biyaha Sodium dioxide sodium hydroxide Oxygen Sodium hydrogen peroxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2O + 2NaO2 → NaOH + O2 + NaHO2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) waxay la falgalaan NaO2 (Sodium dioxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa NaOH (sodium hydroxide) iyo O2 (oxygen) iyo NaHO2 (Sodium hydrogen peroxide)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan NaO2 (Sodium dioxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga NaHO2 (Sodium hydrogen peroxide), oo ka muuqda dhamaadka jawaab celinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda NaO2 (Sodium dioxide), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2O + 2NaO2 → NaOH + O2 + NaHO2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NaO2 (Sodium dioxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaO2 (Sodium dioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaO2 (Sodium dioxide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (Sodium dioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee O2 (Sodium dioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh O2 (oxygen) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta NaHO2 (Sodium hydrogen peroxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaHO2 (Sodium dioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaHO2 (Sodium hydrogen peroxide) alaab ahaan?
2H2O + 4NaBiO3 → 4NaOH + 3O2 + 2Bi2O3
biyaha Sodium bismuthate sodium hydroxide Oxygen Bismuth (III) trioxide; Bismuth (III) xabagta; Bismuth trioxide
2 4 4 3 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2H2O + 4NaBiO3 → 4NaOH + 3O2 + 2Bi2O3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) ee NaBiO3 (Sodium bismuthate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa NaOH (sodium hydroxide) iyo O2 (oxygen) iyo Bi2O3 (Bismut (III) trioxide; Bismuth(III) oxide; Bismuth trioxide)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan NaBiO3 (Sodium bismuthate)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Bi2O3 (Bismuth (III) trioxide; Bismuth (III) oxide; Bismuth trioxide), oo ka muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda NaBiO3 (Sodium bismuthate), oo baaba'aysa
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2H2O + 4NaBiO3 → 4NaOH + 3O2 + 2Bi2O3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NaBiO3 (Sodium bismuthate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaBiO3 (Sodium bismuthate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaBiO3 (Sodium bismuthate) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (Sodium bismuthate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee O2 (Sodium bismuthate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh O2 (oxygen) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha badeecada Bi2O3 (Bismut(III) trioxide; Bismuth(III) oxide; Bismuth trioxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Bi2O3 (Sodium bismuthate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Bi2O3 (Bismuth(III) trioxide, Bismuth(III) oxide, Bismuth trioxide) badeecad ahaan?
5H2O + Na2ReH9 → 9H2 + NaOH + NaReO4
biyaha Sodium nonahydridorhenate hydrogen sodium hydroxide Sodium metaperrhenate; Sodium perrhenate; Metaperrhenic acid cusbada sodium; Sodium perrhenate (VII)
5 1 9 1 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 5H2O + Na2ReH9 H 9H2 + NaOH + NaReO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) waxay la falgalaan Na2ReH9 (Sodium nonahydridorhenate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo soo saari kartaa H2 (hydrogen) iyo NaOH (sodium hydroxide) iyo NaReO4 (Sodium metaperrhenate; Sodium perrhenate; Metaperrhenic acid sodium sodium; Sodium perrhenate (VII))?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan Na2ReH9 (Sodium nonahydridorhenate)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga NaReO4 (Sodium metaperrhenate; Sodium perrhenate; Metaperrhenic acid sodium salt; Sodium perrhenate (VII)), oo soo muuqanaya dhamaadka jawaab celinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Na2ReH9 (Sodium nonahydridorhenate), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 5H2O + Na2ReH9 H 9H2 + NaOH + NaReO4
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Na2ReH9 (Sodium nonahydridorhenate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Na2ReH9 (Sodium nonahydridorhenate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2ReH9 (Sodium nonahydridorhenate) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2 (Sodium nonahydridorhenate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2 (hydrogen) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (Sodium nonahydridorhenate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta NaReO4 (Sodium metaperrhenate, Sodium perrhenate; Metaperrhenic acid sodium salt; Sodium perrhenate (VII))
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaReO4 (Sodium nonahydridorhenate)? Waa maxay falcelinta kiimikada leh NaReO4 (Sodium metaperrhenate, Sodium perrhenate; Metaperrhenic acid sodium cusbo; Sodium perrhenate (VII)) sida alaabta?
2H2O + O2 + 2Na2Te → 4NaOH + 2Te
biyaha Oxygen Sodium telluride; Tellurodisodium sodium hydroxide Tellurium; Te
2 1 2 4 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2H2O + O2 + 2Na2Te → 4NaOH + 2Te
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) waxay la falgalaan O2 (oxygen) oo la falgala Na2Te (Sodium telluride; Tellurodisodium)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa NaOH (sodium hydroxide) iyo Te (Tellurium; Te)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan O2 (oxygen) waxay la falgashaa Na2Te (Sodium telluride; Tellurodisodium)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Na2Te (Sodium telluride; Tellurodisodium), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2H2O + O2 + 2Na2Te → 4NaOH + 2Te
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Na2Te (Sodium telluride; Tellurodisodium)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Na2Te (Sodium telluride; Tellurodisodium)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2Te (Sodium telluride; Tellurodisodium) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (Sodium telluride; Tellurodisodium)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Te (Sodium telluride; Tellurodisodium)? Waa maxay falcelinta kiimikada ee leh Te (Tellurium; Te) alaab ahaan?